Raktarka Jaamacadda Ummadda oo ka qeyb galay shirka jaamacadaha wadama islaamka ee Afrika – Somali National University
Home / News / Raktarka Jaamacadda Ummadda oo ka qeyb galay shirka jaamacadaha wadama islaamka ee Afrika
Waxaa booqashado ku tagay Jaamacadda Caalimiga ee Afrika (IUA), Raktarka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (JUS), Dr. Maxamed Axmed Jimcaale, halkaasuu uga qeyb galay shirka
Shirka jaamacadaha wadama islaamka ee Afrika
oo ay marti galisay Jaamacaddaas.
Madaxda shirkaas kaso qeyb gashay waxey isla meel dhigeen in jaamacadaha ay baahiyaan tacliin sare oo islaami ah taasoo isla markaas xanbaarsan aqoonta sayniska iyo Taknolojiyadda.
Sidoo kale raktarka intuu halkaas joogay wuxuu la kulmay madax badan oo shirkaas kasoo qeybgashay, waxeyna ka wada hadleen sidii Jaamacadda Afrika ee wadamada islaamka ah u yeelan lahaayeen xariir wax wada qabsi.
Raktarka wuxuu si gooni ah ula shiray dhigiisa raktarka jaamacadda caalamiga ee Afrika, waxeyna ka wada hadleen sii xoojinta wax wada qabsiga ee labada jaamacadood. Labada raktar waxey ku heshiiyeen in la fuliyo waxyaabihii ku qornaa heshiishkii ay horey u wada galeen, isla markaasna in la saaro guddi labada dhinac ah oo lix xubnood ka kooban, kaasoo ka shaqeyn doona meel marinta heshiishyada la gaaray.
Waxey si gooni ah ugu heshiiyeen.
1. In Jaamacadda Caalamiga ee Afrika ay ku taageerto Jaamacadda Ummadda dib u dhiska shaqaalihii wax barida (academic staff) iyo kuwa maamulka (admin staff), iyadoo ay jaamacaddaas u fidineyso jaamacadda ummadda deeqo waxbarasho oo sare (Master iyo PhD), taasoo tirade ay go’aamin doonaan guddiga isku dhafka ah ee labada jaamacadood. Intii taas laga gaarayo waxey IUA balan qaaday iney JUS usoo direyso barayaasha iyo borofeesarada ay u baahantahay.
2. IUA waxey ka taageeri doontaa JUS fidinta aqoonta cilmiga iyo taknolojiyadda.
3. IUA waxey JUS ka taageeri doontaa qalabeynta beerta jaamacadda ummadda ee Balcad.
4. Jaamacadda Africa waxey ka taageereysaa JUS hirgalinta xarun Raadiye iyo Telefishin loogu tala galay baahinta waxbarashada.
Raktarka JUS intuu booqashada ku joogay dalka Sudan wuxuu soo booqday beerta jaamacadda Caalamiga ee Afrika taas oo wax soo saarkeedu daboolo boqolkiiba konton (50%) miisaaniyadda jaamacadda IUA.
Booqashada raktarka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waxey ku saabsaneed qibrad qaadasho iyadoo JUS hada dooneyso iney hirgaliso beerta jaamacadda ee ku taal dagmada Balcad, artintaasna waxaa ka taageerayo jaamacado ay ugu horeyso jaamacadda IUA.
Vaal University of Technology (VUT) Vice Chancellor & Principal welcomes Somalian Postgraduate StudentsWelcome to the Faculty of Economic and Management Sciences